Amakhasi amahle kakhulu wokubuka ithenisi mahhala online ngaphandle kokubhalisa | Izindaba zamagajethi
Ithenisi ngumdlalo othakazelisa izigidi zabasebenzisi. Ngezikhathi ezithile, kungenzeka ukubukela imiqhudelwano emikhulu kwezinye iziteshi. Yize ezimweni eziningi kuvame ukukhokha iziteshi ezinikeza imiqhudelwano yalo mdlalo. Ngakho-ke, abasebenzisi abaningi baphoqeleka ukuba bafune ezinye izinketho. Njengoba lezi ziteshi zibiza kakhulu futhi awukwazi noma ufuna ukuzikhokhela imali engaka. Ingxenye enhle ukuthi kukhona njalo izinketho ezitholakalayo.
Ngakho-ke, ngezansi kukhona amanye amakhasi e-web lapho ungabuka khona ukufana kwethenisi Mahhala. Ngakho-ke, ngaphandle kokubhalisa, kungenzeka ukuthi ulandele lezi zinhlobo zemiqhudelwano ngaso sonke isikhathi ngendlela elula. Mane uwafake kusuka kusiphequluli. Ngakho-ke zingabonakala noma kuphi.
Zama inyanga yamahhala: Thola inyanga yamahhala yethenisi neminye imidlalo eminingi kwi-DAZN ngaphandle kokuzibophezela ngokuchofoza lapha
1 Ubuhle nobubi bokubuka ithenisi yamahhala online
2 Okubomvu okuqondile
3 Ukusakaza iTennis
Ubuhle nobubi bokubuka ithenisi yamahhala online
Njengomqondo, inzuzo enkulu yokukwazi ukubuka i-tennis online akudingeki ukuthi ukhokhe. Ezikhathini eziningi, kufanele uqashe amaphakheji angeziwe ukuze ukwazi ukubuka ezemidlalo kuthelevishini yakho. Kubiza imali eningi, ngaphezu kokungakwazi ukukhetha njalo lokho ofuna ukukubona. Ngakho-ke, inketho yokuyibuka online inikeza inkululeko eningi. Umsebenzisi ukhetha ukuthi uzokubonani, uzokubona nini futhi kunethezeke ngokwengeziwe.
Ukukhethwa kwemiqhudelwano kuvame ukuba kukhulu online. Ngakho-ke ungabuka i-tennis yamadoda, yabesifazane noma ephindwe kabili ngaphandle kwenkinga enkulu. Okuthile okungenzeki njalo eziteshini zethelevishini, lapho ukukhethwa kwemidlalo kunqunyelwe futhi kukhethwa abambalwa emncintiswaneni ngamunye. Le nkinga iphela uma uyibuka ku-inthanethi.
Ikhwalithi isici esiguqukayoYize emakhasini amaningi kuvame ukwamukeleka, kungahle kube nemidlalo lapho isixhumanisi kuphela esinekhwalithi engesihle. Okuwukuhlangenwe nakho okungalungile kokubuka komsebenzisi okukhulunywa ngaye. Ngakho-ke kuyinto encike kumdlalo ngamunye othize noma iwebhu evakashelwayo.
Emakhasini amaningi sihlangabezana nokwaziswa okuningi kakhulu. Okuthile okuhlala kucasula futhi kwezinye izikhathi kungasithiya ekubukeni umdlalo wethenisi okukhulunywa ngawo. Ngakolunye uhlangothi, ukuthola izixhumanisi kungahle kungabi lula ngaso sonke isikhathi. Kunezikhathi lapho ikhasi linesixhumanisi somdlalo ofuna ukulibona, kepha isixhumanisi siwela noma singasebenzi bese kungenzeki ukubona umdlalo oshiwo.
Uma ufuna ukujabulela ikhwalithi yesithombe ehamba phambili futhi ngaphandle kokukhangisa, manje ungakwazi zama i-DAZN inyanga eyodwa mahhala.
Mhlawumbe iwebhusayithi eyaziwa kakhulu ukubukela ezemidlalo ku-inthanethi mahhala. Kuyaziwa ngokuba nemidlalo eminingi yebhola likanobhutshuzwayo, yize kuwebhu kukhona nayo inombolo enkulu yemidlalo yethenisi etholakalayo. Ngakho-ke kungenzeka ukulandela ukufana kwemidlalo yomhlaba ebaluleke kakhulu kuyo. Ngaphezu kwalokho, kuvame ukuba nezixhumanisi eziningi ezitholakala kuwebhu, ezenza kube nokwenzeka ukufinyelela emisakazweni ebukhoma futhi ukhethe eyodwa enekhwalithi engcono kakhulu.
Ikhwalithi ivame ukuguquguquka kuwebhu, yize kuhlala kukhona izixhumanisi ezimbalwa ezinokulungiswa okuhle, ukuze ukwazi ukujabulela ithenisi enhle kakhulu enekhwalithi yesithombe esihle. Ngakho-ke, le webhusayithi ihlale iyindlela enhle ongayibheka lapho ufuna ukubuka ezemidlalo zamahhala online. Akuyona leyo esinikeza imiqhudelwano eminingi, kepha singahlala silandela umentshisi, ikakhulukazi eGrand Slam, ngendlela elula kakhulu.
Okwesibili, sithola iwebhusayithi enikezelwe kuphela kuthenisi. Ngakho-ke, kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zabasebenzisi abafuna nje ukubuka lo mdlalo. Kuyo singabona yonke imiqhudelwano ebisaqhubeka ngaleso sikhathi, futhi sifinyelele izixhumanisi ukubona imidlalo edlalwa kulo mqhudelwano othile. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Banenombolo enkulu yezixhumanisi ezitholakalayo, mhlawumbe ezinkulu kakhulu uma ziqhathaniswa namanye amawebhusayithi.
Ikhwalithi yesithombe sayo ivame ukuba yinhle impela, ngaphezu kokuba nezixhumanisi eziningi, ukuze kuhlale kunokwenzeka ukuthola eyodwa enekhwalithi yesithombe oyifunayo. Ukuzinza kuvame ukuba kuhle kakhulu, ngakho-ke ungabuka umentshisi wethenisi ngaphandle kokuphazamiseka. Mhlawumbe iwebhusayithi engcono kakhulu yokubuka lo mdlalo online. Kunconywa ngokuphelele
Enye iwebhusayithi eyaziwayo yabaningi, ekuvumela ukuthi ubuke ukufana kwebhola lazo zonke izinhlobo zamaligi. Yize kuwebhu sinesigaba seminye imidlalo. Kukhona nokufinyelela kumentshisi yethenisi. Zihlale zisesikhathini kakhulu, ngakho-ke une-ajenda yosuku olutholakalayo. Ngakho-ke kungenzeka ukufinyelela ukufana okutholakala ngalolo suku ngendlela elula. Banikeza izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi ahlukile.
Banenqwaba yezixhumanisi ezitholakalayo, ukuze kube lula ukufinyelela kumdlalo wethenisi onentshisekelo kuwo. Ikhwalithi, njengokujwayelekile kulawa macala, iyahlukahluka, kanye nokuzinza kwalezi zixhumanisi. Kepha kuhlala kukhona ukuxhumana okuhle nekhwalithi yesithombe enhle. Ngakho-ke, uma ufuna ukufana kwethenisi, yiwebhusayithi okufanele uhlale uyikhumbula.
Iwebhusayithi efana naleyo edlule, esaziwa ngemidlalo yayo yebhola, kepha ebilokhu ikhulisa isibalo semidlalo etholakalayo. Ithenisi inobukhona obubalulekile kule webhusayithi, lapho inesigaba sayo khona. Kuyo singabona yonke imiqhudelwano edlalwayo ngaleso sikhathi bese sifaka izixhumanisi zokubona imidlalo kulo mqhudelwano ehehayo. Njalo kusesimweni futhi kunenombolo enkulu yezixhumanisi ezitholakalayo. Enye yezinto eziphelele kakhulu kulo mqondo.
Futhi, Bajwayele ukuba nezixhumanisi ezizinzile ezinekhwalithi engaphezulu kwamukelekile. Okusiza ukungadingi ukusesha kakhulu noma kufanele ushintshe izixhumanisi kaningi. Ngakho-ke, ukukwazi ukujabulela umdlalo wethenisi ngaso sonke isikhathi. Ezinye izixhumanisi ziseSpanishi. Ikhasi elihle, ngaphandle kokudala i-akhawunti ukuze ukwazi ukubona yonke imidlalo oyithandayo ngendlela elula.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ukuphanga » Ungayibuka kanjani ithenisi mahhala online
Ungabonakali kanjani ku-inthanethi ku-WhatsApp
9 kufanele abe namagajethi ahambisana ne-Amazon Echo ne-Alexa